।अञ्चल अस्पतालमा डायलसिस शुरु « Thahaonline.com | थाहा अनलाइन
।अञ्चल अस्पतालमा डायलसिस शुरु
दिपक बोहरा, तुलसीपुर ९ बैशाख ।
राप्ती अञ्चल अस्पताल तुलसीपुरमा डायलासिस सेवा शुरु भएको छ । पूर्बाधार निर्माणको काम पूरा भएपछि आईतबार देखि सेवा शुरु भएको हो । पुसमै सेवा शुरु गर्ने भनिएपनि पूर्बाधार र जनशक्ति अभाबकै कारण सेवा शुरु हुन सकेको थिएन् । समयमै सेवा शुरु नहुँदा चौतर्फी आलोचना हुने गरेको थियो । तर आईतबार देखि सेवा शुरु भएपछि यस क्षेत्रका बासिन्दाहरु खुसी भएका छन् । डायलासि सेवा शुरु भएसंगै मृगौलाका बिरामीहरु बाहिरी जिल्ला जानुपर्ने बाध्यता टरेको छ । डायोलोसिस सेवा सञ्चालनका लागि ४ जना कर्मचारीको ब्यबस्थापन गरिएको छ । एक जना फिजिसिएन, एक जना मेडिकल अधिकृतसहित २ जना नर्सहरु रहेको राप्ती अञ्चल अस्पताल बिकास समितिका अध्यक्ष बिष्णुकुमार देवकोटाले बताए । उनका अनुसार फिजिसिएन डा. मीनचन्द्र अधिकारी, मेडिकल अधिकृत सामिनी चौधरीसहित दुई जना तालिम प्राप्त नर्सहरु रहेका छन् । अस्पतालमा दुई वटा डायलासिस मेसिन जडान गरिएको भएपनि अहिले एउटा मात्रै सञ्चालनमा आएको अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेण्डेन्ड डा. बिनोद सिंहले बताए ।
एउटा मेसिन केही समय पछि सञ्चालनमा आउने उनले बताए । दुईवटै मेसिन सञ्चालनमा आएपछि हप्तामा ६ जनालाई सेवा दिन सकिने उनले बताए । उनका अनुसार एउटा बिरामीलाई हप्तामा दुई पटक डायोलोसिस गर्नुपर्ने भएकाले हप्तामा ६ जना मात्रै मृगौलाका बिरामीलाई सेवा दिन सकिन्छ । अहिले डायोलोसि सेवा सञ्चालनका लागि एउटा जेनेरेटर जडान गरिएको अस्पताल बिकास समितिका अध्यक्ष देबकोटाले बताए । तर एउटा जेनेरेटरले मात्रै नपुग्ने भन्दै सेवालाई निरन्तरता दिन थप अर्को जेनेरेटर आबश्यक रहेको उनले बताए । यसका लागि स्थानीय सरकारले पहल थाल्नुपर्ने उनको भनाई छ ।
सेवाको उद्घाटन गर्दै तुलसीपुर उपमहानगरपालिाकाका उपप्रमुख माया आचार्यले डायालोसिस सेवासहित अस्पतालका अन्य सेवा प्रभाबकारी बनाउन उपमहानगरले पहल थाल्ने आस्वासन दिईन् । त्यस अबशरमा डायालोसिस सेवा प्रमुख मीन चन्द्र अधिकारीले सेवालाई थप प्रभाबकारी बनाउन वाटर सप्लाई, बिद्युत, थप कर्मचारी आबश्यक रहेको बताए । पहिलो पटक तुलसीपुर १९ बिजौरीका तेज बहादुर बस्नेतलाई सेवा दिईएको हो । सेवा निशुल्क हुने छ । प्रक्रिया पूरा गरी अस्पतालमा आएका बिरामीलाई हप्तामा दुईपटक निःशुल्क सेवा दिईने मेसु सिंहले बताए । दाङमा डायलसिस सेवा नहुँदा मृगालाको बिरामीहरु महंगो रुपैयाँ खर्च गरेर बाहिरि जिल्लामा जानु पर्ने बाध्यता रहेको थियो । डायलसिस सेवा शुरु भएसंगै सल्यान, प्युठान, रुकुम, रोल्पासहितका जिल्लाहरुबाट समेत सेवा ग्राहीलाई सहज हुने बिश्वास लिईएको छ ।